Shirkad Maraykana oo dib u celisay $ 400 Milyan oo ay ugu deeqday Sacuudi Carabiya | Berberanews.com
Home WARARKA Shirkad Maraykana oo dib u celisay $ 400 Milyan oo ay ugu...
Shirkad Maraykana oo dib u celisay $ 400 Milyan oo ay ugu deeqday Sacuudi Carabiya
Tifaftiraha Hay’adda Beverly Hills, Endeavor, ayaa ku soo noqotay lacag dhan 400 oo milyan oo doolar oo maal-galiya Saudi Arabia, ayna joojisay qandaraaska ay kula gashay boqortooyada dilkii Jamal Khashoggi dartii, sidaana waxa sheegay New York Times.
Dhaqaalaha waxaa la siiyay madaxa shirkada Ariel Emanuel inta lagu guda jiro xaflad weyn oo Hollywood ah oo la soo dhaafay, kaas oo isu keenay wadaadada Sacuudiga Salman Mohammed bin Salman (MBS), madaxa maamulka Disney Robert Iger iyo aasaasaha Amazon Jeff Bezos.
Lacagta waxaa loola jeedaa in lagu maalgeliyo koritaanka Dhaq-dhaqaaqa iyo kobcinta dhaqaalaha boqortooyada iyada oo loo marayo shaqooyinka hay’adaha ee qaybaha kala duwan, oo ay ku jiraan wax soo saarka cayaaraha iyo filimka.
Laakiin ka dib dilkii Khashoggi, shirkadda ayaa dib u soo celisay dhaqaalaha, iyagoo ka soo horjeeda dilka, oo si wax ku ool ah u soo afjartay xidhiidhkii ay la lahayd Sacuudi Carabiya, sida laga soo xigtay laba ilo NYT oo aqoon u leh heshiiska.
Heshiiska ayaa yimid bilooyin ka dib markii shirkado badan oo caalami ah, oo ay ku jiraan Uber iyo Goldman Sachs, ay joojiyeen qorshayaal ay uga qaybgalayeen shirkii maalgashiga ee caasimada Sucuudiga, Riyadh bishii October sanadkii hore.
Waxaa sidoo kale raacay Richard Branson, oo asaasay warbaahinta Britishka iyo shirkadaha tiknoolajiyadeed ee Virgin Group, oo joojiyay wadahadaladii Sacuudi Carabiya ee maalgashiga suurtagalka ah ee shirkaddiisa ganacsiga, NYT ayaa werisay.
Intii lagu guda jiray booqasho Maraykanku guga la soo dhaafay, MBS waxay la kulantay tiro ka mid ah siyaasiyiinta Maraykanka iyo hoggaamiyeyaasha ganacsiga, iyagoo raadinaya heshiisyo lagu horumarinayo Maalgashiga Maalgashiga Dadweynaha ee Sacuudi Carabiya oo yareeya ku tiirsanaanta dalka ee saliidda.
Intii uu safarka socday, wuxuu saxeexay heshiis lala galayo shirkadda filimada ee AMC iyo shirkadda loo yaqaan ‘Six Flags’ si loogu ballaariyo Boqortooyada waxayna dhiirigelisaa ganacsigeeda madadaalada, sida ay sheegtay NYT.
Khashoggi, qoraaga Washington Post iyo dhaleeceynta xukuumadda Riyadh, ayaa lagu dilay qunsuliyada Sacuudiga ee Istanbul 2-dii October.
Isbuucyo ka dib markii la diidey in ay wax ka qabtaan lumitaankiisa, boqortooyada ayaa ugu dambeyntii qiratay in saraakiishooda ay ka dambeeyeen dilka. Halka uu weli hayo weli lama garanayo.
Sida laga soo xigtay saraakiisha Turkiga, jirkii Khashoggi ayaa la jarjaray, kaas oo markii dambe lagu gubay foorno dabiici ah oo ku taal beerta qunsulka guud ee qunsuliyada, qiyaastii 300 mitir qunsulka.
Khashoggi dhimashadiisa iyo daboolka soo socda ayaa sababay inaysan ka niyad jabin Washington oo ku saabsan rikoorka xuquuqda aadanaha ee Sacuudi Carabiya.
Khamiistii, qaar ka mid ah odayaasha Maraykanka ayaa ku dooday madaxweyne Donald Trump inuu u yahay danjiraha Maraykanka u fadhiya Sacuudi Carabiya, si uu u qaado khadad adag oo ku saabsan xuquuqda aadanaha iyo xadgudubyo kale oo ay boqortooyadu leedahay.
Senators waxay ku eedeeyeen Boqortooyada Midab-takoorid iyo mid ka mid ah Senator-ka oo ku dhaleeceeyay MBS sidii “gangster buuxa”.
Bishii la soo dhaafay, Golaha Wakiiladu wuxuu soo saaray qaraar ah in la joojin doono taageerada Mareykanka ee ku aaddan isbahaysiga Sacuudi Carabiya ee Yeman, oo ah xoog dib u dhiska Riyadh.
Previous articleDaawo Madaxaweyne Biixi oo safar ugu kicitimay dalka Imaaaraadka
Next articleMaxaa baajiyay socdaal la filayay in Dr. Abiye Axmed uu Hargeysa ku iman lahaa arbacadii?
Maraykanka oo ku dhawaaqay in uu ciidamo geynayo Sucuudiga
Berbera: Laba Qof oo Ku dhintey Shil baabuur
Iran: cid kasta oo na soo weerarto cashar lama illaawaan ah...
Dawladda Hoose ee Berbera oo soo gabogabaysay Qorshayaashii magaalada ee 2019
“Anigoo Jeelka ku Jira ayaan Imtixaanka Galay” Wasiir C/laahi Abokor
Waa maxay farriinta Ilhaan Cumar u dirtay Netanyahu?
Magaalada Hawadey oo laga afduubey mid ka mid ah Baabuurta qaadka...
Saamayn noocee ah buu Somaliland ku yeelan karaa ka bixitaanka heshiiska...
Madaxweyne Biixi oo dhagaxdhigay Haamo cusub oo laga dhisayo Berbera
Qarax lala beegsaday Masuulliyiinta Shabeellada dhexe
Madaxweynaha Somaliland oo ku dhawaaqay inay ka noqdeen Heshiiskii saldhiga Imaaraadka
Madaxtooyada oo Guurtida dub ugu celisay mid ka mid ah xubnaha...